ဟောကျဆနျအဝါး အတှကျ အာဆငျနယျက ဂှမျဒူဇီ အလိုကျပေးကမျးလှမျးတာကို ပယျခလြိုကျတဲ့ လိုငျယှနျအသငျး – Myan Ball
ဟောကျဆနျအဝါး အတှကျ အာဆငျနယျက ဂှမျဒူဇီ အလိုကျပေးကမျးလှမျးတာကို ပယျခလြိုကျတဲ့ လိုငျယှနျအသငျး
လိုငျယှနျအသငျးဟာ ကှငျးလယျလူ ဟောကျဆနျအဝါးအတှကျ အာဆငျနယျက ဂှမျဒူဇီ အလိုကျပေးပွီး ကမျးလှမျးတာကို ပယျခလြိုကျတယျလို့ ပွငျသဈက သတငျးမြားအရ သိရပါတယျ။အသကျ ၂၂ နှဈအရှယျကစားသမားဟာ ဥရောပက အသငျးတျောတျောမြားမြားရဲ့ ပဈမှတျဖွဈနပွေီး ဒီရာသီမှာ လိုငျယှနျခနျြပီယံလိဂျကှာတားဖိုငျနယျကို ရောကျအောငျ ကူညီစှမျးဆောငျပေးထားသူ ဖွဈပါတယျ။
အာဆငျနယျနညျးပွ အာတီတာဟာ ၂၀၂၀-၂၁ ဘောလုံးရာသီအတှကျ အသငျးကို ကွိုတငျပွငျဆငျနပွေီး အာဆငျနယျအသငျးကို အဆငျ့ (၄) အတှငျး ပွနျလညျဝငျရောကျအောငျ ကှငျးလယျအငျအားကို ဖွညျ့တငျးခငျြနတောပါ။ L’Equipe က သတငျးမြားအရ လနျဒနျကလပျအသငျးဟာ ဟောဆနျအဝါးကို ဂှမျဒူဇီအလိုကျပေး ကမျးလှမျးခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ ပွငျသဈလီဂူး ၁ အသငျးဟာ အသကျ ၂၂ နှဈအရှယျကစားသမားဟာ ဒီနှရောသီမှာ အသငျးက ထှကျခှာမယျလို့ ဝနျခံထားသျောလညျး ကမျးလှမျးမှုကို ပယျခလြိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။
လိုငျယှနျအသငျးရဲ့ အားကစားဒါရိုကျတာ ဂြူနငျဟိုကလညျး RMC အားကစားသတငျးဌာနကို “ဟောကျဆနျအဝါးကိုလား? အသငျးမှာ ကောငျးတဲ့ ကစားသမား ရှိရငျ အသငျးကွီးတှကေ ချေါယူရနျ ကွိုးစားလာကွတာ ပုံမှနျပါပဲ။ အရေးပါတဲ့ ကစားသမားတှကေို ဆုံးရှုံးရတာ ရှိနိုငျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ အရေးကွီးတဲ့ကစားသမားတှေ ဆုံးရှုံးမယျဆိုရငျ အသငျးဥက်ကနဲ့ စကားပွောထားပွီးပါပွီ။ ကြှနျတျောတို့ဟာ အသငျးရဲ့ အငျအားကို မြှတအောငျ လုပျသှားရမှာပါ” လို့ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။ ဟောကျဆနျအဝါးဟာ လိုငျယှနျအသငျးအတှကျ ဒီရာသီမှာ (၃၉) ပှဲကစားထားပွီး (၉) ဂိုးသှငျး (၈) ဂိုးဖနျတီးပေးထားသူ ဖွဈပါတယျ။
ဟောက်ဆန်အ၀ါး အတွက် အာဆင်နယ်က ဂွမ်ဒူဇီ အလိုက်ပေးကမ်းလှမ်းတာကို ပယ်ချလိုက်တဲ့ လိုင်ယွန်အသင်း
လိုင်ယွန်အသင်းဟာ ကွင်းလယ်လူ ဟောက်ဆန်အ၀ါးအတွက် အာဆင်နယ်က ဂွမ်ဒူဇီ အလိုက်ပေးပြီး ကမ်းလှမ်းတာကို ပယ်ချလိုက်တယ်လို့ ပြင်သစ်က သတင်းများအရ သိရပါတယ်။အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ကစားသမားဟာ ဥရောပက အသင်းတော်တော်များများရဲ့ ပစ်မှတ်ဖြစ်နေပြီး ဒီရာသီမှာ လိုင်ယွန်ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတားဖိုင်နယ်ကို ရောက်အောင် ကူညီစွမ်းဆောင်ပေးထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဆင်နယ်နည်းပြ အာတီတာဟာ ၂၀၂၀-၂၁ ဘောလုံးရာသီအတွက် အသင်းကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေပြီး အာဆင်နယ်အသင်းကို အဆင့် (၄) အတွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်အောင် ကွင်းလယ်အင်အားကို ဖြည့်တင်းချင်နေတာပါ။ L’Equipe က သတင်းများအရ လန်ဒန်ကလပ်အသင်းဟာ ဟောဆန်အ၀ါးကို ဂွမ်ဒူဇီအလိုက်ပေး ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြင်သစ်လီဂူး ၁ အသင်းဟာ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ကစားသမားဟာ ဒီနွေရာသီမှာ အသင်းက ထွက်ခွာမယ်လို့ ၀န်ခံထားသော်လည်း ကမ်းလှမ်းမှုကို ပယ်ချလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လိုင်ယွန်အသင်းရဲ့ အားကစားဒါရိုက်တာ ဂျူနင်ဟိုကလည်း RMC အားကစားသတင်းဌာနကို “ဟောက်ဆန်အ၀ါးကိုလား? အသင်းမှာ ကောင်းတဲ့ ကစားသမား ရှိရင် အသင်းကြီးတွေက ခေါ်ယူရန် ကြိုးစားလာကြတာ ပုံမှန်ပါပဲ။ အရေးပါတဲ့ ကစားသမားတွေကို ဆုံးရှုံးရတာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အရေးကြီးတဲ့ကစားသမားတွေ ဆုံးရှုံးမယ်ဆိုရင် အသင်းဥက္ကနဲ့ စကားပြောထားပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အသင်းရဲ့ အင်အားကို မျှတအောင် လုပ်သွားရမှာပါ” လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ဟောက်ဆန်အ၀ါးဟာ လိုင်ယွန်အသင်းအတွက် ဒီရာသီမှာ (၃၉) ပွဲကစားထားပြီး (၉) ဂိုးသွင်း (၈) ဂိုးဖန်တီးပေးထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။
နီကိုးလပျဈပီပီအတှကျ ပေါငျ ၇၂ သနျး ပေးခဲ့ရတာနဲ့ ပတျသကျပွီး အသငျးအတှငျး စုံစမျးစဈဆေးတှေ စတငျလုပျဆောငျနပွေီဖွဈတဲ့ အာဆငျနယျ